UNgqongqoshe uthi akuqiniswe umthetho konogada bamatekisi | News24
UNgqongqoshe uthi akuqiniswe umthetho konogada bamatekisi
UNGQONGQOSHE wezokuThutha, nokuPhepha koMphakathi, nokuXhumana KwaZulu-Natal uMnuz Mxolisi Kaunda unxuse inhlangano i-Private Security Regulatory Authority (PSIRA) kanye namaphoyisa ukuba beqinisekise ukuthi izinkampani zonogada bezimboni zamatekisi ziyawugcina umthetho othi izibhamu zabo akumele zibonakale kumphakathi.
UNgqongqoshe ukusho lokhu ngemuva kokuthi kudubuleke kwalimala intombazane eneminyaka eyisithupha (6) ubudala embonini yamatekisi aseShakaskraal ngoMsombuluko oledlule.
Okhulumela amaphoyisa ase Umhlali, uMnuz Vinny Pillay uthe umsolwa othinteka kulesi sigameko uvele enkantolo yase Umhlali ngoMsombuluko, ngomhlaka 19 kuMandulo (September) ngecala lokuzama ukubulala.
Uthe umsolwa unikezwe ibheyili ka-R2000 kanti kulindeleke ukuthi uzobuyela enkantolo ngomhlaka 24 kuMfumfu (October).
Uqhube wathi ingane eyalimala kulesi sigameko isasesibhedlela saseStanger kanti iyalulama.
kusolakala ukuthi umsolwa nomshayeli wetekisi eyayigitshelwe isisulu baba nokungazwani kahle ngokwenkulumo ngaphambi kokuthi kudubuleke ingane nowesifazane.
UNgqongqoshe uMnuz Kaunda unxuse i-PSIRA ukuthi ithathe izinyathelo ezifanelekile ukuze izinkampani zonogada zizothobela umthetho.
Uthe: “UMnyango wezokuThutha ubambisene nenhlangano i-PSIRA kanye namaphoyisa kumele uthole indlela yokuthi izinkampani zonogada kanye nabazisebenzelayo bayawuthobela umthetho. Akwamukelekile ukuthi onogada balezi zinkampani bavumelekile ukuthi behambe bephethe izibhamu emphakathini ngoba lokhu kuhlukumeza abagibeli. Sekumele sisifakele amehlo lesi simo yingakho kumele sithole indlela yokuqinisekisa ukuthi umthetho uyagcinwa. Wonke umuntu unalo ilungelo lokuzivikela yena nempahla yakhe kodwa lokhu akumele kubeke izimpilo zamalungu omphakathi egcupheni,” kusho uMnuz Kaunda.
Uqhube wathi izinkampani zonogada kumele zithobele umthetho futhi zigqugquzele ukuphepha kwabagibeli.
Uthe: “Izimboni zamatekisi ziyizindawo zomphakathi okusho ukuthi akekho onelungelo lokulawula umphakathi kulezi zindawo. Kuyasikhathaza kakhulu ukuthi izinkampani zonogada bezimboni zamatekisi zike zathinteka ezigamekweni zodlame ngaphambilini kulomkhakha wamatekisi. Kwezinye izigameko kukhona onogada ababoshwa bagwetshelwa amacala odlame kulomkhakha wamatekisi. Sinxusa bonke osomatekisi ukuba bayihlaziye kahle indima edlalwa izinkampani zonogada kulomkhakha ukuze bezolekelela ekutheni kuqinisekiswe ukuthi umthetho uyagcinwa,” kusho uNgqongqoshe.
USihlalo weSANTACO esifundeni iLembe, uMnuz Bongani Musawenkosi Mkhwanazi uthe kubeyindida ebakhathaze kakhulu njenge nhlangano ukuthi unogada waphunyuka ngendlela aphunyuka ngayo kwaze kwalimala abagibeli njengoba unogada bekumele aqinisekise ukuthi abagibeli baphephile.
Uqhube wathi okunye okukhathazayo ukuthi inhlamvu ibiphezulu kwisibhamu sikanogada othintekayo okuyinto engafanelekile.
Uthe: “Siyazwelana kakhulu nezisulu ezalimala kulesi sigameko kanye nomphakathi wonke. Sifisa umphakathi wazi ukuthi siyawuhlonipha kakhulu njengoba abagibeli bethu kuyibona o-baas bethu,” kusho uMnuz Mkhwanazi.
Uthe inhlangano i-SANTACO izohlangana nenhlangano yamatekisi i-Dolphin Coast Taxi Association ngoLwesibili, ngomhlaka 20 kuMandulo ukudingida loludaba ukuze kuzotholakala amasu azoqinisekisa ukuthi isigameko esifanayo siyagwemeka enkathini ezayo.